How to take care of ur baby's umbilical cord? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
How to take care of ur baby’s umbilical cord?
ကလေးခကျြကွိုးကို ဘယျလို ဂရုစိုကျမလဲ
မီးဖှားပွီး ခကျြကွိုးဖွတျပွီးလြှငျကလေး၌ခကျြကွိုးအပိုငျးအစလေးကနျြခဲ့မညျဖွဈသညျ။ ထိုအရာလေးသညျ ၁ပတျမှ ၃ပတျအတှငျးသူ့အလိုအလြောကျ ခွောကျ၍ကွှကေသြှားလိမျ့မညျ။
‌ ထိုခကျြကွိုးအစလေး မကွှသေေးခြိနျတှငျသနျ့ရှငျး၍ခွောကျသှနေ့စေရေနျထားပေးရမညျ။ နနှငျးသိပျခွငျးမြိုးလုံးဝမလုပျရပါ။ ခကျြကွိုးနှငျ့အနီးနားတဝိုကျတှငျ ပေါငျဒါ၊ lotionသုံးခွငျးရှောငျရှားရမညျ။ ရစေိမျ၍မခြိုးဘဲ ရပေတျတိုကျပေးရမညျ။ သနျ့ရှငျး၍နူးညံ့သောအဝတျစ (သို့) ဝါဂှမျးစကိုရစှေတျ၍ ရညှေဈပွီးခကျြကွိုးအောကျခွပေတျလညျကိုအသာဆေးပေးသငျ့သညျ။ ထို့နောကျသနျ့ရှငျးသောအဝတျခွောကျဖွငျ့သုတျပေးရမညျ။
မှေးကငျးစကလေးသုံးသော diaper (သို့) diaper ကိုခကျြနှငျ့လှတျအောငျခေါကျ၍ဝတျပေးရမညျ။ ခကျြကွိုး လနှေငျ့ထိတှမှေု့ရှိ၍မွနျမွနျခွောကျသှားစရေနျ အင်ျကြီပှပှလေးမြားဆငျပေးသငျ့သညျ။ ခကျြကွိုးအား မညျသညျ့အခါမြှဆှဲဖွုတျရနျမကွိုးစားသငျ့ပါ။ ကလေးခကျြကွိုးအား မကိုငျမှီနှငျ့ ကိုငျပွီးခြိနျတှငျလကျသခြောဆေးရမညျ။ ထိုအစလေးကို အရကျပွနျဖွငျ့သနျ့ရှငျးခွငျးလညျးမလုပျသငျ့ပါ။ ပိုးဝငျလြှငျ ဖွဈတတျသော လက်ခဏာမြားမှာ ခကျြကွိုးအခွတေဝိုကျရှိ အရပွေားနီနခွေငျး၊ နံသောအနံ့ထှကျခွငျး၊ အဝါရောငျအရညျထှကျခွငျး နှငျ့ခကျြကွိုး(သို့)ခကျြကွိုးပတျလညျရှိအရပွေားကိုထိမိရုံမြှဖွငျ့ငိုခွငျးတို့ဖွဈသညျ။ အထကျပါလက်ခဏာမြားဖွဈလြှငျဆရာဝနျနှငျ့ပွသရမညျ။ ခကျြကွိုးဖွတျထားသောနရောမှ သှေးမတိတျပဲ ဆကျတိုကျထှကျနလြှေငျလညျးဆှေးနှေးတိုငျပငျသငျ့သညျ။
‌ ခကျြကွိုးအလိုအလြောကျကွှသေောအခါ diaperတှငျသှေးအနညျးငယျပတေတျသညျ။ သို့ရာတှငျစိုးရိမျစရာမလိုပါ။ ခကျြကွှပွေီးနောကျ အရကွေညျ(သို့)အဝါရောငျအရညျထှကျ၍ အသားစအနညျးငယျကနျြနလြှေငျ ဆရာဝနျနှငျ့ပွသသငျ့သညျ။ ခကျြကွှပွေီးခြိနျတှငျသာမနျအတိုငျးဆပျပွာဖွငျ့ရခြေိုးနိုငျပွီဖွဈသညျ။ ပွီးလြှငျခကျြအတှငျးသို့ရခွေောကျအောငျသုတျပေးရမညျ။ ဒဏျရာကကျြပွီးခြိနျတှငျပေါငျဒါ၊ lotion စသညျတို့ကိုအသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ ဤအခြိနျတှငျ ပိုးဝငျရနျအခှငျ့အလမျးနညျးသျောလညျး ခကျြကိုမကိုငျခငျနှငျ့ ကိုငျပွီးခြိနျတှငျ လကျကိုသခြောဆေးကွောရမညျဖွဈသညျ။
ကလေးချက်ကြိုးကို ဘယ်လို ဂရုစိုက်မလဲ
မီးဖွားပြီး ချက်ကြိုးဖြတ်ပြီးလျှင်ကလေး၌ချက်ကြိုးအပိုင်းအစလေးကျန်ခဲ့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာလေးသည် ၁ပတ်မှ ၃ပတ်အတွင်းသူ့အလိုအလျောက် ခြောက်၍ကြွေကျသွားလိမ့်မည်။
‌ ထိုချက်ကြိုးအစလေး မကြွေသေးချိန်တွင်သန့်ရှင်း၍ခြောက်သွေ့နေစေရန်ထားပေးရမည်။ နနွင်းသိပ်ခြင်းမျိုးလုံးဝမလုပ်ရပါ။ ချက်ကြိုးနှင့်အနီးနားတဝိုက်တွင် ပေါင်ဒါ၊ lotionသုံးခြင်းရှောင်ရှားရမည်။ ရေစိမ်၍မချိုးဘဲ ရေပတ်တိုက်ပေးရမည်။ သန့်ရှင်း၍နူးညံ့သောအဝတ်စ (သို့) ဝါဂွမ်းစကိုရေစွတ်၍ ရေညှစ်ပြီးချက်ကြိုးအောက်ခြေပတ်လည်ကိုအသာဆေးပေးသင့်သည်။ ထို့နောက်သန့်ရှင်းသောအဝတ်ခြောက်ဖြင့်သုတ်ပေးရမည်။
မွေးကင်းစကလေးသုံးသော diaper (သို့) diaper ကိုချက်နှင့်လွတ်အောင်ခေါက်၍ဝတ်ပေးရမည်။ ချက်ကြိုး လေနှင့်ထိတွေ့မှုရှိ၍မြန်မြန်ခြောက်သွားစေရန် အင်္ကျီပွပွလေးများဆင်ပေးသင့်သည်။ ချက်ကြိုးအား မည်သည့်အခါမျှဆွဲဖြုတ်ရန်မကြိုးစားသင့်ပါ။ ကလေးချက်ကြိုးအား မကိုင်မှီနှင့် ကိုင်ပြီးချိန်တွင်လက်သေချာဆေးရမည်။ ထိုအစလေးကို အရက်ပြန်ဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းလည်းမလုပ်သင့်ပါ။ ပိုးဝင်လျှင် ဖြစ်တတ်သော လက္ခဏာများမှာ ချက်ကြိုးအခြေတဝိုက်ရှိ အရေပြားနီနေခြင်း၊ နံသောအနံ့ထွက်ခြင်း၊ အဝါရောင်အရည်ထွက်ခြင်း နှင့်ချက်ကြိုး(သို့)ချက်ကြိုးပတ်လည်ရှိအရေပြားကိုထိမိရုံမျှဖြင့်ငိုခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အထက်ပါလက္ခဏာများဖြစ်လျှင်ဆရာဝန်နှင့်ပြသရမည်။ ချက်ကြိုးဖြတ်ထားသောနေရာမှ သွေးမတိတ်ပဲ ဆက်တိုက်ထွက်နေလျှင်လည်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်သည်။
‌ ချက်ကြိုးအလိုအလျောက်ကြွေသောအခါ diaperတွင်သွေးအနည်းငယ်ပေတတ်သည်။ သို့ရာတွင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ချက်ကြွေပြီးနောက် အရေကြည်(သို့)အဝါရောင်အရည်ထွက်၍ အသားစအနည်းငယ်ကျန်နေလျှင် ဆရာဝန်နှင့်ပြသသင့်သည်။ ချက်ကြွေပြီးချိန်တွင်သာမန်အတိုင်းဆပ်ပြာဖြင့်ရေချိုးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ပြီးလျှင်ချက်အတွင်းသို့ရေခြောက်အောင်သုတ်ပေးရမည်။ ဒဏ်ရာကျက်ပြီးချိန်တွင်ပေါင်ဒါ၊ lotion စသည်တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤအချိန်တွင် ပိုးဝင်ရန်အခွင့်အလမ်းနည်းသော်လည်း ချက်ကိုမကိုင်ခင်နှင့် ကိုင်ပြီးချိန်တွင် လက်ကိုသေချာဆေးကြောရမည်ဖြစ်သည်။
” မိနျးမကိုယျသနျ့စငျဆေးရညျမြားအကွောငျး သိကောငျးစရာ “
Lifestyles of pregnant women in winter